Sergio Aguero oo billaabay tababarka Barcelona… + (Sawirro & Farriintii ugu horreysay ee uu diray) – Gool FM
(Barcelona) 31 Luulyo 2021. Sergio Aguero ayaa soo xaadiray tababarka naadiga Barcelona kahor xilligaa lagu jadwaleeyay inuu soo laabto isagoo si aad ah u muujiyay inuu doonayo ka qayb qaadashada kulammada isu diyaarinta xilli ciyaareedka cusub.
Saxiixa cusub ee Barca ayaa qayb ka ahaa safkii xulka Argentina u gacan geliyay tartanka Copa America ee xagaagan lagu qabtay dalka Brazil, waxayna kooxda reer Spain siisay fasax dheer inkastoo uu isaga qayb kasoo jiray fasaxiisa, waxaana haatan uu sameynayaa tababar gaar ah.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan billaabo tababarka waxaana u kululahay inaan la kulmo xiddigaha isku kooxda nahay” ayuu yiri Aguero oo maalmihii lasoo dhaafay fasax ku qaadanahay Ibiza.
Si kastaba ha ahaatee, Aguero ayaa ka mid ah afar saxiix oo illaa haatan ay sameysay Barcelona isagoo si bilaash ah ugu soo biiray kaddib markii uu dhacay qandaraaskii uu kula joogay Barcelona.
"Messi miyaa sidaan u qurux badan!?" - Peter Crouch oo kashifay sheeko uu Rio Ferdinand ka baahiyay hab-dhaqankii CR7 xilligii uu ku sugnaa Man United